महिला/बालबालिका – Satyapati.com
Loading... आजः बुधवार, माघ ८, २०७६/ Wednesday 22nd January 2020 7:22 am
नारामै सीमित ‘बिहेवारी बीस वर्षपारि’
बाँके । युवायुवती र अभिभावकको जनजिब्रोमा ‘बिहेवारी बीस वर्षपारि’ भनाइ झुण्डिएको भएपनि व्यावहारिक परिपालनमा चुनौती देखिएको छ । जिल्ला केही सचेत युवायुवती र किशोरी बाल क्लबमार्फत जनेतनामूलक कार्यक्रममा लागि...
किन छिनमै रिसाउने, छिनमै शान्त हुन्छन् महिला ?
काठमाडौं । महिलाहरूको व्यवहारमा कहिलेकाहीँ असामान्य परिवर्तन आउँछ । छिनमै रिसाउने, छिनमै शान्त हुने । कहिले भावनात्मक रूपमा कमजोर हुने । कहिले जति खाए पनि नअघाउने, कहिले रूच्दै नरूच्ने...
नेपालमा उमेर नपुग्दै ‘लभ म्यारिज’
काठमाडौं । भर्खरै किशोरावस्था हिँडिरहेकी आशा क्षेत्री कार्की एक दिन घरबाट पढ्न जान्छु भनेर निस्किइन् । तर घरबाट निस्केपछि उनी सिधै प्रेमीकहाँ पुगिन् र दुई जनाले भागेर विवाह गरे...
बझाङमा छाउगोठ भत्काइँदै
बझाङ । बझाङ जिल्लामा पनि जिल्लाभरका छाउगोठको तथ्याङ्क संकलन गर्न र छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु गरिएको छ । जयपृथ्वी नगरपालिकाको धार्मीलेखबाट सुरु गरिएको छाउगोठ भत्काउने अभियानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीे,...
बालमैत्री स्थानीय शासनको मुख्य चुनौती बालश्रम
बाँके । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने अभियान यहाँ सञ्चालन गरिए पनि तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुँदा अभियान सफल नहुनेमा आशङ्का व्यक्त हुन थालेका छन् । बाँके जिल्लालाई बालश्रमिक...
पाँच महिनामा ६९ बलात्कारका घटना, अधिकांश घटनामा मिलापत्र
दाङ । दाङमा बलात्कारका घटना बढेका छन् । जिल्लामा धेरैजसो बालिका र किशोरी बलात्कारको मारमा पर्ने गरेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जनाएको छ । इन्सेकको तथ्यांकअनुसार गएको साउनदेखि...
५७२ नेपाली महिला बेपत्ता
बाँके । नेपालगन्ज नाकाबाट बाहिरिएका ५७२ जना महिलाको अवस्था अज्ञात रहेको छ । सन् २०१९ मा यो नाकाबाट ८६९ जना महिला जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेकोमा २९७ जनामात्रै फेला परेका हुन्...
रोकिएन बालबिवाह : सानैमा सन्तान, आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जोखिममा
कैलाली । कानुनले २० वर्षमूनिको बिवाहलाई दण्डनीय मानेको छ । कसैले जवरजस्ती बालबिवाह गर्छ भने त्यसलाई सजायको ब्यवस्था पनि कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाको ज्योतिनगरमा...
दुई श्रीमती विदेशमा, श्रीमान् घर कुरुवा !
सेलाङ । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–१ सेलाङका ३६ वर्षीय भीमबहादुर लोप्चनको १७ वर्षको कलिलै उमेरमा छिमेकी राममायासँग बिहे भयो । शुरुका केही दिन त हाँसखेलमै बिते । वर्ष बित्दै गयो...
‘पढ्ने अवसर नहुँदा उमेर नपुग्दै विवाह’
बाँके । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२०, नयाँबस्ती थपुवाकी मनिषा परियार मनिकापुर स्वास्थ्य चौकीको प्रसूति गृहमा तीन/चार दिनदेखि धाइरहेकी थिइन् । आफ्नो उमेर १९ वर्ष बताउने परियारका खुट्टा सुन्निएका थिए, शरीरमा रगतको...